स्कुलमा मोबाइल प्रतिबन्ध किन ? «
स्कुलमा मोबाइल प्रतिबन्ध किन ?
प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७६, बिहीबार १०:२३
स्कुलमा मोबाइल प्रतिबन्ध किन ? बारे भुपाल सिंह राई आफ्नो फेसबुकमा यस्तो लेख्छन । कक्षा सन्चालन भइरहेकै बेला कक्षा कोठा भित्रै शिक्षकहरुले मोबाइलमा गेम खेलेर बस्नु । फेसबुक चलाएर बस्नु । फोनमा कुरा गरेर समय बिताउनु। विद्यार्थीहरुले पढाइमा भन्दा मोबाइलको गेम वा फेसबुक प्रती अनावश्यक ध्यान दिनु ।
कसको मोबाइल कति महँगो भन्ने विद्यार्थीबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढनु र आफ्नो अभिभावकसंग महँगो मोबाइल फोनको माग गरेर आर्थिक भार बढाउनु । विद्यार्थीहरुलाई स्कुलमा मोबाइल फोन बोक्न दिनु वा नदिनु कुन उपयुक्त होला ? धेरैको मत हुन्छ दिनु हुँदैन भन्ने ।
शोधकर्ताहरुले गरेको अध्ययन अनुसार किशोरावस्थाका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमै मोबाइल फोन बोक्न दिँदा उनीहरुको ध्यान पढाइप्रति भन्दा पनि मोबाइलप्रति नै केन्दि्रत हुने र फोन र इन्टरनेटमार्फत गलत क्रियाकलापतर्फ समेत लाग्ने भय अभिभावक तथा शिक्षकहरुमा रहने गरेको छ । धेरैको अनुभवले पनि यो देखाएकै हो । तर पछिल्लो पटक यस विषयमा एक अनुसन्धान नै भएको छ र उक्त अनुसन्धानले मोबाइल फोनलाई स्कुलमा किन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ? भन्ने कुराको दहि्रलो तर्क पेश गरेको छ ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार स्कुलमा विद्यार्थीलाई मोबाइल फोन बोक्न दिनु भनेको उनीहरुको ध्यान भंग गराउनु तथा पढाइमा अवरोध पूराउनु हो । स्कुलमा मोबाइल फोनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विद्यार्थीहरुको परीक्षाफलमा पनि सुधार हुने गरेको शोधकर्ताहरुको निष्कर्ष रहेको छ । नयाँ प्रविधिले व्यक्तिको उत्पादकत्व तथा कार्यसम्पादनस्तरमा वृद्धि गर्ने सामान्य सोँचाइ हुने गरेको भएपनि सबै अवस्थामा त्यस्तो नहुने शोधकर्ता रिचार्ड मर्फी बताउँछन् । उनका अनुसार जब प्रविधिहरु बहुउद्धेश्यीय हुन्छन्, जस्तै मोबाइल फोन, तब ती ध्यान भंग गर्ने तथा अवरोध सिर्जना गर्ने खालका हुन्छन् ।